छोरीको बिहेमा आमा तरुनी देखिएपछि पर्‍यो फर्साद … « गोर्खाली खबर डटकम
छोरीको बिहेमा आमा तरुनी देखिएपछि पर्‍यो फर्साद …
छोरीको बिहेको माहोल छ। कोभन्दा को कम हुनै प¥यो। त्यसमाथि आहान नै छ, ‘छोरीभन्दा आमा तरुनी देखिनुपर्छ।’ कहिलेकाहीँ सुन्दर देखिने लोभमा त्यसले उल्टै दुलाहा र उनको जोरीपारीलाई टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुनसक्छ तर छोरीको बिहे हो, अरुलाई के मतलब ? बेलायतको मिरर पत्रिकाले हालै यसबारे खबर प्रकाशित गरेको छ।
भयो के भने छोरीको बिहेमा आफू पनि मस्त तरुनी देखिनु प-यो भनेर दुलहीकी आमाले एउटा बिहेको पहिरन अनलाइनबाट किनिन्। अब कुनै पसलमा किनेको भए पो, बेच्न बसेकाले सुहायो या सुहाएन भनेर प्रतिक्रिया दिन्थे र मन पनि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्थ्यो !
अनलाइनबाट किनेपछि त्यो परीक्षणको कुरा पनि भएन, उनलाई सुझाव दिनेहरु पनि कोही भएनन्। त्यसैले त्यो पहिरन लगाएर उनी बिहेको दिन पुगिन्। पहिरन कस्तो भने, छातिको भाग चिरिएको ! बिहे हुने बेलामा अन्तिम अवस्थामा मात्र दुलहीकी आमालाई यस पहिरनको गम्भीरता बुझिन् तर अन्तिम अवस्थामा अर्को पहिरन, कहाँबाट कसरी ल्याउनु ? त्यसैले त्यही लगाएर गइन्। अब फसाद के प-यो भने दुलहीलाई भन्दा पनि दुलहीकी आमाको छातितिर सबैले नजर दौडाउन थाले ! जब दुलहीकी आमाले तस्बिर फेसबुकमा हालिन्, धेरैले मजाक उडाउन थालिहाले।
धन्न, फेसबुकमा मजाक बनाएकी आमाको पक्ष लिएर दुलहीले आफूलाई ड्रेस राम्रो लागेको भनी लेखिन्। अब आमा छोरी नै भएर बचाउमा लागिसकेपछि टिप्पणीकर्ताहरु पनि ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ मान्दै चुपचाप हुन थाले। त्यसो त हतपतको काम लतपत त्यसै भनिएको होइन !
कोरोना संक्रमित बढेपछी सीसीएमसीलो बैठक बस्दै
एमालेलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित र पुनर्गठन गर्दै अघि बढ्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ